BeSoccer အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
5.2.4.8 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（19.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် BeSoccer - Soccer Live Score
BeSoccer သည်ဘောလုံးတိုက်ရိုက်ရမှတ်များ၊ သတင်းများ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။
ဘောလုံးပွဲပြိုင်ပွဲ ၁၀၀၀၀၀ ကျော်နှင့်အတူ သည်တိုက်ရိုက်ပွဲများကိုသင်လိုက်နိုင်ပြီးဂိုး၊ လိုင်း၊ သတင်း၊
ကမ္ဘာပေါ်မှသင့်အသင်းများနှင့်အကြိုက်ဆုံးကစားသမားအားလုံးအတွက် အပြည့်စုံဆုံးဘောလုံးမှတ်တမ်း ကိုကြည့်ပါ။
⚽ဘာကြောင့်ပရိသတ်လဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ BESOCCER
•အားလုံး ဒီနေ့ပွဲများအတွက်အစအချိန် -
•သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကိုမည်သည့်ရုပ်သံလိုင်းများပြသနေသည်ကိုအတိအကျသိထားပါ။ •နောက်ဆုံးပေါ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ကောလာဟလများ။ •တိုက်ရိုက်ဂိမ်းများကိုတိုက်ရိုက်လိုက်နာပါ။ •ကစားသမားများနှင့်အသင်းများအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အသုံးပြုသူများ၏ထင်မြင်ချက်များကို အခြေခံ၍ ပွဲစဉ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြင်း။
အခြားအားကစားများမှသတင်းများ (ဘတ်စကက်ဘော၊ အားကစား၊ တင်းနစ်၊ အပြေးပြိုင်ပွဲ)
Y သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ကိုက်ညီရန် APP အားကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ထားခြင်း
သင်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများနှင့်ကစားသမားများဖြစ်သောတိုက်ရိုက်သတိပေးချက်များ ကိုရယူပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ ပန်းတိုင်များ၊ ရလဒ်များ၊ လိဂ်စားပွဲများ၊ အသင်းများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကတ်များ၊ ဒဏ်ရာများ၊
⚽ LEAGUE TABLES၊ ရလာဒ်များ၊ အခြေအနေများနှင့် ထပ်မံ၍
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဓိကပြိုင်ပွဲများနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုများမှစာရင်းများ၊ သတင်းများနှင့်ရမှတ်များ -
La Liga၊ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ Serie A၊ Bundesliga၊ Ligue 1, MLS, Eredivisie နှင့်အခြားပြိုင်ပွဲများဖြစ်သည့်ချန်ပီယံလိဂ်၊ Europa League၊ Concacaf ချန်ပီယံ၊ Eurocup တို့ဖြစ်သည်။
BeSoccer နှင့်သင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းမှဒုတိယဌာနခွဲများကိုလိုက်နာနိုင်လိမ့်မည်။
ဥပမာ UK တွင်သင်သည် Championship၊ League One နှင့် Two၊ National National, Non League Premier နှင့် FA အမျိုးသမီးစူပါလိဂ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
ကလပ်အသင်းအားလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့်သတင်းများအပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သည်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ ဘာစီလိုနာ၊ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ မန်ချက်စတာစီးတီး၊ အာဆင်နယ်၊ လီဗာပူး၊ ချယ်လ်ဆီး၊ PSG၊ Juventus၊ ဘိုင်ယန်၊ LA Galaxy၊ သင်၏အကြိုက်ဆုံးကစားသမားများဖြစ်သော Lionel Messi၊ Cristiano Ronaldo, Hazard, Sergio Ramos, Pique, Neymar, Mbappe, Mo Salah, Mane, Luka Modric, Harry Kane, Ibrahimovic, Rooney ...
⚽ PLAYER နှိုင်းယှဉ်
ကစားသမား၏ကိန်းဂဏန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ မည်သူသည်ဘောလုံးပွဲများပိုမိုပြုလုပ်နေသည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂိုးသွင်းကိန်းဂဏန်းစာရင်းဇယားများ၊ အထောက်အကူများ၊ အရည်အချင်းများ၊ ဆုဖလားများနှင့်သင်၏မေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းနိုင်ခြင်း။ မက်ဆီလား၊ ရော်နယ်ဒိုလား ဟာဇက်လား၊ Mbappe (သို့) နေမာ ဘယ်ကစားသမားကဂိုးပိုသွင်းနိုင်လဲ။
ANS တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် WINDOW
ဘောလုံးအပြောင်းအလဲသတင်းနှင့်အညီမွမ်းမံပါ။ သင်ပြောင်းရွှေ့သည့်သတင်းနှင့်ကောလာဟလများ၊ ကစားသမားအားလုံးနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးတွင်ကစားနိုင်လိမ့်မည် အားလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်အသင်းများနှင့်လွှဲပြောင်းလှုပ်ရှားမှု။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်မျှော်လင့်ထားကြသော နောက်ဆုံးပေါ်ဘာစီလိုနာကောလာဟလတွေကဘာတွေလဲ။ La Liga၊ MLS (သို့) ပရီးမီးယားလိဂ်စတဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ကဘယ်လိုလဲ။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုဘယ်သူခေါ်မည်နည်း အဲဒါတွေအားလုံးကငါတို့ရဲ့သတင်းတွေ၊
သင်၏အကြံပြုချက်များနှင့်မှတ်ချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် app ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာတိုက်ရိုက်ဘောလုံးရမှတ်များ၊ သတင်းများနှင့်ကိန်းဂဏန်းများအတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။
Facebook Facebook.com/besoccerlivescore Twitter - @BeSoccer_com - Instagram - besoccer.en - အီးမေးလ်များ: [email protected]
ဘာအသစ်လဲ BeSoccer - Soccer Live Score 5.2.4.8
BeSoccer Soccer Live Score Apps on Google Play:BeSoccer 5.2.2.1 for Android:BeSoccer Live Score APK
Do you know the BeSoccer app?
the best app. 🙋‍♂️
Aung Ko Lat